Microstation: Iingxaki ngonobumba ñ kunye nee-aksenti -iGeofumadas
Microstation: Iingxaki ngonobumba ñ kunye neeakisi
NgoJuni, 2011 Microstation-Bentley
Le ngxaki ixhaphakile, nokuba basinike ifayile, sayingenisa kwi-AutoCAD okanye sisebenza nje. Kuyenzeka ukuba xa usebenzisa oonobumba abakhethekileyo, njengonobumba ñ, isicatshulwa esinee-aksenti okanye iisimboli ezinje nge #, @,% ezihlala zihleli kwizicwangciso azibonwa, ziboniswa kakuhle kwibhokisi yencoko kodwa xa zibekwe zikhangeleka Uphawu lombuzo okanye i-asterisk.
Ayisiyo ukuba isicatshulwa asibhalwanga kakuhle, kukuba uhlobo lwefonti esetyenzisiweyo aluhambelani neetafile zabalinganiswa. Kuya kubakho ezinye iindlela zokusombulula kodwa nantsi ingcebiso yam ekhawulezayo:
Shintsha ifayile kumntu ongaqhelekanga
Kule nto, sikhetha yonke into esithakazelisayo ekutshintsheni, oku kuya kwenziwa ukhetho ngamacandelo. Ukuba ezi zikuluhlu olunye kulula kakhulu.
Ukuze ukwenze ngomgca ngamnye okanye umhlathi, nqakraza kabini kwisicatshulwa, ukuba ufuna ukukwenza ngendlela enkulu, sebenzisa umyalelo ukuhlela umbhalo, kuboniswe kumfanekiso.
Into efanelekileyo kukusebenzisa imithombo eqhelekileyo kwiWindows, njenge:
Ukuba sifuna umthombo wokukhanya, ofana ne-ENGENEERING, kucetyiswa
Njengeengcebiso zokugqibela, njengokuba kunoma yimuphi umsebenzi ovela kwi-Ofisi ukuya kwi-design yoyilo, kufuneka kubhalwe iincwadi ezinzima, asizalisi izicwangciso, asizalisi idiploma.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iimephu ezininzi ze-AutoCAD, i-Civil 3D ne-Desktop i-Desktop
Post Next Free Book GISOkulandelayo »